आज ७७ वटै जिल्लामा सरकारविरुद्ध काँग्रेसको प्रदर्शन — onlinedabali.com
आज ७७ वटै जिल्लामा सरकारविरुद्ध काँग्रेसको प्रदर्शन
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले आज देशभर सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत रहेको कांग्रेसले सरकार सर्वसत्तावादको अभ्यासमा लागेको भन्दै कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लि‌एको विरोधमा काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले आज देशभर एकैसाथ शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुल उद्घाटन गर्न पुगेका नेता पौडेललाई सरकारले प्रहरी लगाएर अवरोध गरेपछि काँग्रेस विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको छ ।
देशमा भ्रष्टाचार बढेको, प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागिपरेको, कोरोना नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा बेवास्ता गरी नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै गएकोले विरोध जनाउन देशव्यापी प्रदर्शन गरिएको काँग्रेसले जनाएको छ ।
आज हुने विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गर्न केन्द्रीय नेता ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेका छन् । पूर्वसन्ध्यामा आइतबार साँझ काँग्रेसले काठमाडौंसहित विभिन्न शहरमा सिठी जुलुस निकालेको थियो ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवादेखि केन्द्रीय नेताले सम्बोधन गर्न ठाउँ र जिल्ला काँग्रेसले यसअघि नै तोकिसकेको थियो । जसमा सभापति देउवाले हेटौंडामा हुने विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यस्तै, वरिष्ठ नेता पौडेलले काठमाण्डौमा हुने प्रदर्शनको नेतृत्व गर्नेछन् ।
त्यसैगरी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भक्तपुर र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले ललितपुर, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले विराटनगर, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले झापा, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले काभ्रे, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले धनुषा, सहमहामन्त्री सुनीलबहादुर थापाले धनकुटा र पूर्वसहमहामन्त्री डा.रामशरण महतले चितवन, अर्जुननरसिंह केसीले कास्कीमा हुने विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
काँग्रेसको प्रदर्शनले कोरोना संक्रमण बढ्ने चिन्ता बढेको छ । तर काँग्रेसले भौतिक दूरी कायम गर्दै मास्क लगाएर सडक प्रदर्शन गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएको छ ।